प्रधानमन्त्री ओली असार ५ गते चीन भ्रमणमा निस्कदै
काठमाडौ“ । असार ५ आउन अझै झण्डै एक हप्ता बाँकी छ तर मुलुकको राजनैतिक वृत्त यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको विषयलाई लिएर तातिरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीका चीन भ्रमणका एजेन्डाहरु अझै सार्वजनिक भइसकेका त छैनन्, तर राजनैतिक वृत्तमा आसन्न चीन भ्रमणको विषयलाई लिएर चिन्ता, चासो र बहस बढ्दै गइरहेको छ ।
माननीय हत्याराज्यू भनेर सम्बोधन गर्ने ?
काठमाडौ“ । राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता तथा सांसद दुर्गा पौडेलले संसद बैठकमै सभामुख समक्ष प्रश्न राख्नु भएको छ– “सम्माननीय सभामुख महोदय, फौजदारी अभियोग लागे पनि सांसदको सांसद पद निलम्बन नहुने भएपछि उसलाई सम्बोधन गर्दा के अब माननीय हत्याराज्यू भनेर सम्बोधन गर्ने ?”
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम यथास्थितवादी प्रकारको ः जिसीबुटवल । राष्ट्रिय जनमोर्चाकी ५ नं. प्रदेश सभा सांसद तारा जिसीले प्रदेश सरकारद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम यथास्थितवादी प्रकारको रहेको बताउनु भएको छ । ५ नं. प्रदेश सरकारले प्रदेश संसदमा आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेपछि त्यसमाथिको सैद्वान्तिक छलफलमा भाग लिदै सांसद जिसीले उक्त कुरा बताउनु भएको हो । बाँकी...»
इलाहावाद–उत्तर प्रदेश ः
मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजको भारतव्यापी नगर सम्मेलन अभियान भव्यताका साथ सम्पन्न भइरहेको छ । यसै क्रममा उत्तर भारत क्षेत्रीय समिति अन्तर्गत इलाहावाद नगर समितिको आठौँ सम्मेलन जुन २–३, २०१८ का दिन सम्पन्न भएको छ । सम्मेलनको उद्घाटन समाजका महासचिव खगेश्वर शर्माले गर्नु भएको हो ।
‘रक्तिमका गीत असान्दर्भिक बनून्’काठमाडौ“ । रक्तिम सांस्कृतिक अभियानका अध्यक्ष तथा श्रमजीवी वर्गका प्रिय गायक जीवन शर्माले आफ्ना गीत रचनाहरु असान्दर्भिक नै होऊन भन्ने चाहेको बताउनु भएको छ । “म चाहन्छु, मेरा गीत रचनाहरु असान्दर्भिक भइदिऊन्, दुःख, वेदना, विद्रोह र मुक्तिका सन्देश दिने गीत होइन, विकास र समृद्विका गीत गाउने मलाई पनि इच्छा छ” जनगायक जीवन शर्माले भन्नु भएको छ– बाँकी...»